Faafin: SomaliTalk.com | September 9, 2011 | Aragtida Dadweynaha
Go'aamadii ka soo baxay shirkii "wada tashiga" ee ay soo qabanqaabisay Qarammada Midoobey, laguna qabtay magaalada Muqdisho (Sept 4 - 6, 2011) ayaa waxaa kamid ah in 19-ka December 2011 lagu dhawaaqi doono xuduud badeedka Soomaaliya ee loo yaqaan "EEZ" (Exculisive Economic Zone) ama "Aagga Dhaqaalaha ee Gaarka ah".
Qodobkaasi waxa uu meel ka dhac ku yahay xeerka u degganaa Qaranka Soomaaliyeed muddo 40 sano ah, xeerka Law no. 37 ee 1972 oo si cad u qeexaya in Soomaaliya ay leedahay DHUL-BADEED (Territorial Waters), dhul-badeedkaas oo cabirkiisu xeebta ka durugsan yahay 200 mayl-badeed. Sidaas daraadeedna Hadalka aan meesha qaban ee ku qoran qodobada ka soo baxay shirkii Muqdisho waa oraahda "Exclusive Economic Zone" EEZ (Aagga Dhaqaalaha ee Gaarka ah).
Bogga 5aad ee 12-ka bog ee loogu magac daray "Roadmap" (Hab-raaca sannadka 2011/2012) ee la doonayo in ay hirgeliso DFKMG ee laga soo saaray shirkii Muqdisho oo ku qornaa luqadda Af-Ingiriisiga ayaa waxaa ku cad sidan:
(Key Tasks and Timeline) --- (1) EEZ declared by 19 December 2011;
(Responsibility) -- Prime Minister special envoy for EEZ issues.
Qodobkaas waxaa lagu qeexay in xeerka "Aagga Dhaqaalaha ee Gaarka" ee Badda Soomaaliya (EEZ) in lagu dhawaaqi doono 19 December 2011 - ayadoo aan laga hadlin Territorial Waters ee laga hadlayo EEZ (Waana laba arrimood oo aad u kala duwan, sida hoos ku qeexan). Waxaana halkaas ka muuqata in DFKMG iyo "jaalkeedu" ay rabaan in lagu dhawaaqo sharci cusub oo ku aadan "EEZ" ee Badda Soomaalida, kaas oo lagu tirtiraayo Law No. 37 (1972).
Go'aanadii laga soo saaray shirkii Muqdisho (September 6, 2011) madaxda saxiixday waxaa ugu horeeya Ra'iisul Wasaaraha DFKMG, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas).
Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Cabdiweli Gaas ayaa ayaguna September 8, 2011 waxay "si buuxda uwada ansixiyeen go’aankii kasoo baxay shirka wadatashiga" ee Muqdisho.
Waxaana jira warar tibaaxaya in sharciga cusub ee loo soo wado Badda Soomaaliya in uu yahay kii uu Wasiirkii Kaluumeysiga ee xukuumaddii Maxamed Farmaajo looga soo dhiibey London horaantii sanadkaan 2011. Waxayana xukuumadda cusub ee C/weli Gaas u muuqataa in ay u gogol dhigeyso sidii 19-ka December 2011 loo dhaqan gelin lahaa waxa loogu yeero "cabirka EEZ", taas oo tirtiraysa xeerkii Badda Soomaaliya u deganaa 40-ka sano, Law No. 37 (1972).
Sawirka hoose waa bogga 5aad ee qodobadii laga soo saaray shirkii Xamar, Septeber 6, 2011.
Waxaa cad go'aamada loogu yeeray "Roadmap" oo la doonayo in laga ansixiyo DFKMG in ay ku hoos qarsoon yihiin qodobka sare oo noqonaya KHIYAANO QARAN. Sidaas daraadeedna ay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka DFKMG in aysan ansixin, sababaha hoose awgood.
Si aan u fahamno ujeedadda oraahdaas (Exculisive Economic Zone) iyo macnaha ku hoos jira, aan qeexid cad markale ka bixino meesha ay khinaada weyni ku jirto:
Kaddib markii lagu guulaysan waayey heshiiskii Is-fahamka (MOU) ee badda Soomaaliya, ayaa - sida aan taariikhaha hoose ka arki doono - waxaa la bilaabay sidii madaxda DFKMG looga saxiixan lahaa in ay dhaqan geliyaan Oraahda ah "Soomaaliya waxay leedahay Xuduuda Dhaqaale ee u gaarka ah ee loo yaqaan(Exculisive Economic Zone) oo ah 200 mayl-badeed" - Arrintaas oo haddii ay dhaqan gasho halis weyn ku ah jiritaanka DHUL-BADEEDKA Soomaaliyeed.
Oraahdaas (EEZ) waxaa looga gol-leeyahay in lagu suuliyo xeerka badda Soomaaliyeed ee loo yaqaan (Law No. 37 oo ku saabsan DHUL-BADEEDKA Soomaaliya - Territorial Sea / Territorial Waters ee soo baxay 10kii September 1972) - oo ah xeer la loodin waayey - in madax Soomaaliyeed oo baa'bisa loo helo mooyee, taas oo 20-kii sano ee ugu dambeeyey la raadinayey, haddana ay u muuqato in la helay xukuumadda FKMG oo u diyaar u ah in fuliso arrintaas.
Exculisive Economic Zone (EEZ)- waxaa loo yaqaan aag dhaqaale oo dalka xeebta leh uu ka faa'iidaysan karo khayraadka ku jira, laakiin aan ka mid ahayn dhulka dalkaasi leeyahay.
Territorial Waters (TS) - waa dhul-badeed sharci ahaan iyo qaanuun ahaan ka mid ah dhulka dalka xeebtaas leh, baddaas oo la xeerka berriga dalkaasi leeyahay. Ufiirso xeerka badda Soomaaliyeed ee No. 37 waxa uu ka hadlayaa ma aha EEZ ee waxa uu hadlayaa waa Territorial Waters (TS), waana arrinta dagaalka loogu jiro in la maxaso.
Arrinta layaabka leh waxay tahay sababta 2011 looga hadlayo 200 mayl-badeed, halkii laga hadli lahaa 350 maly-badeed, maadaama Qarammada Midoobay ay dalalka xeebaha leh u qoondaysay cabbirkaas dambe. Arrintaas qoondaynta 350 mayl-badeed oo u dhigma 648 km oo weli ka socota Qarammada Midoobay oo ay ugu dambaysey 6 September 2011 oo ay jamhuuriyadda Guyana u gudbisay cabbirkeeda.
Soomaaliya Dhul-badeedkeedu waa 648 km (350 mayl-badeed)
Shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ayaa is hortaagey heshiiskii damaca ahaa ee la doonayey sannadkii 2009 in lagu xalaalaysto dhul-badeed aad u baaxad weyn oo ay leedahay ummadda Soomaaliyeed. Qorshahaasi halgan dheer oo shacabi ah kaddib waxa uu ku dambeeyey fashil in uusan u dhaqan gelin xukuumadda FKMG oo doonaysey in ay dhul-badeedkaas xagal daaciso.
Shacabka Soomaaliyeed waxay garab ka heleen xubnaha Baarlamaanka FKMG, oo si geesinimo iyo wadaniyad leh isu hortaagey heshiiskaas. Waxaase muuqatey in khiyaamadii qaran ee lala maaganaa dhul-badeedka Soomaaliyeed aysan halkaas ku dhammaan. Taas si aan u fahamno heerarkii ay soo martay, aan taariikhdan yar jalleecno:
1991 kaddib burburkii xukuumaddii Soomaaliya ayaa Kenya waxay xiriir la samaysay qab-qable dagaal oo ku sugnaa magaalada Kismaayo si wada xaajood ugala gasho xudduudda badda, qab-qablahaasi waa ku gacan sayray qorshahaas.
2004 markii xukuumaddii FKMG ee uu madaxda ka ahaa C/laahi Yuusuf lagu soo dhisay Eldoret/Nairobi ayaa Kenya waxay xiriir la sameeyeen madax sare oo ka tirsanayd xukuumaddaas si wada xaajood ay ugala yeeshaan xuduudda badda, laakiin xukuumaddaasina waa diidey arrintaas in ay heshiis ka galaan.
Badda Soomaaliya Afgarasho mise isafgarad
2009 bilowgiisii markii Jabuuti lagu soo dhisay xukuumadda FKMG ee uu madaxda ka yahay Sheikh Shariif, ra'iisul wasaarena uu ka ahaa Cumar C/rashiid Sharmaarke. Waxaana durbadiiba April 7, 2009 ay Kenya la gashay heshiis loogu magac daray Isfaham, maalin kaddib April 8, 2009 ayaa DFKMG waxay heshiiskaas u gudbisey UN-ka. April 14, 2009 ayaana si degdeg ah website-ka UN-ta lagu daabacay isfahamkaas.
Agoosto 1, 2009 ayaa baarlamaanka DFKMG si aqlabiyad ah heshiiskaas uga dhigay WAXBA KAMA JIRAAN. Go'aankaas baarlamaanka Soomaaliya muddo 8 bilood ah ayuusan soo dhaafin xafiisyada xukuumaddii Cumar C/rashiid iyo Sheikh Shariif, muddaddas kaddib ayaa loo gudbiyey QM.
May 2010: Madaxda xukuumadda FKMG iyo dalalkii damaca watey oo is garabsanaya ayaa bilaabay qorshe lagu xagal daacinayo go'aankii baarlamaanku ku diidey heshiiskii Is-fahamka. Hindise qorshe cusub ayaa lagu soo barbaariyey shirkii Soomaalida loo qabtay 21-23 May 2010 ee ka dhacay Istanbuul, Turkiga, kaddib markii Wasiirkii Xannaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ee DFKMG Abuukar Cabdi Cusmaan uu shirkaas Istanbul ka yiri "Aagga Ganacsiga EEZ ee badda Soomaaliya looma cabirin si rasmi ah oo waafaqsan xeerka badaha Adduunka ee Qarammada Midoobey." Hadalkaas oo hordhac u ahaa silsilad xiriirsan oo lagu xagal daacinayo xeerkii dhul-badeedka Soomaaliyeed ee soo jirey 40 sano.
June 11, 2010 ayaa Norway waxa ay sheegtay in ay Soomaaliya u samaynayso CABBIRKA aagga ganacsiga EEZ oo ah 200-mayl badeed, taas oo loo qaatay hirgelin arrintii ay DFKMG u ololaynaysey ee ahayd in badda Soomaaliyeed la yiraahdo malaha cabbir la yaqaan oo hadda ayaa loo samaynayaa.
October 14, 2010 ayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee DFKMG waxaa loo magacaabay Maxamed C/laahi Farmaajo. Waxaana durbadiiba soo baxay in dib loo soo celinayo qorshahii badda Soomaaliya lagu doonayey in lagu dhaxal wareejiyo. Dabayaaqadii October (2010) waxaa soo ifbaxay in dublomaasiga cusub ay xukuumaddu u xilsaartay qorshaha cusub.
October 20, 2010 warbixin ay faafisay ECOTERRA ayaa sheegtay in uu jiro dukumiinti cusub oo looga golleeyahay "agaasimid cusub ee aagga ganacsiga badda EEZ" ee Soomaaliya. Dukumiintigaas "loogu magac daray bud-dhigidda ama dib-u-agaasimida aagga Ganacsiga EEZ", haddii ay saxiixaan DFKG iyo/ama Maamuladda Dawlad Goboleedyada, waxaa dukumiintigaas ku jira weero sheegaya in Soomaaliya iyo/ama Dawlad Goboleedyadu ay tahay in ay ka tanaasulaan xuquuqda ay u leeyihiin baaxadda badda ee ah 200 mayl-badeed, isla markaasna xuquuqdooda lagu xadido ama lagu soo koobo 12 mayl-badeed."
October 24, 2010 Safiirka DFKMG u fadhiya UN, Dr. Cilmi Axmed Ducaale, ayaa sheegay in badda Soomaaliya cabbirkeedu ka yar tahay fogaanta 200 mayl badeed.
October 27, 2010 ayaa warbixin ay soo saaray Barwaaqa sooranka Yurub waxa ay ku sheegeen inay Kenya ka caawinayaan sidii ay Soomaaliya ugala xaajoon lahayd xuduudda badda. Waxaana islamarkaas Nairobi lagu qabtay tababar ay khubaro ka socota Barwaaqa Sooranka Yurub ay siinayeen saraakiil Kenya oo ku saabsan sida Soomaaliya ugala xaajoog lahaayeen xuduudda badda.
Janaayo 18, 2011 ayaa waxaa soo shaac baxay heshiis 10 sano ah oo ay shirkadda lagu magacaabo "Sifaynta Badweynta" (Clear Ocean) ay la gashay DFKMG, shirkaddaas oo sheegtay in ay iibsatey Markab milatari oo ay lahaayeen Militariga Norway. Arrintaas waxaa ka hortegey muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku sugan Norway oo xiriir toos ah la sameeyey wasaaradda Arrimaha Dibadda Norway, arrintaas oo sababtay in Janaayo 21, 2011 ay Dawladda Norway joojisey in markabka militari laga iibiyo shirkadda reer Norway.
May 5, 2011 ayaa Wasiirkii xilligaas ee Wasaaradda Kalluumeysiga, Kheyraadka Badda iyo Bey’ada ee DFKMG, Maxamed Macallin Xasan (Mohamed Moalin Hassan) waxa uu sheegay hadalkan: "Waxaan dhawaan ka soo laabtay safar aan ku tegey dalka UK, oo ahaa safar shaqo, shaqadaas oo ku saabsanayd sidii loo soo gabagabayn lahaa hawl in muddo ahba aan ka wadnay oo la xiriirta xadaynta badda Soomaaliya, iyo in aan ka keenay dukumiintigii ugu dambeeyey ee finalka ahaa ee jeexayey xadaynta badda, ayadoo loo sameeyey sida waafaqsan sharciga badaha ee caalamiga ah iyo kan United Nationka ee loo yaqaan United Nations Convention on Law of Sea. Dukumiintigana waa loo gudbin doonaa Qarammada Midoobay, taas oo lagu diiwaan gelin doono xaqa ay Soomaaliya u leedahay in waxa loo yaqaan "Xuduudda Dhaqaale ee u Gaarka ah" Soomaaliya (Exculisive Economic Zone) ay tahay 200 nautical miles oo u dhiganta 370.4 kiiloomitir" - DHEGEYSO.
May 5, 2011 shirkii jaraa'id ee xukuumadda DFMG waxaa kale oo lagu xusay "Dokumentigan iyo khariidooyinka la socda waxaa lagu soo daabaci doonaa websiteyada QM". Taas oo markaas macnaheedu yahay in Kenya oo aan weli loo qoondayn baddeeda ay tixraac u adeegsan karto, dhehina doonto "Maadaama baddiinu ay tahay EEZ, markaas waa in dib loo cabiro" - arrintaas oo ah tii ay shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka DFKMG ay ka dhiidhiyeen, kana hor tageen. Waana xagal daacin cusub oo u baahan difaac cusub.
Sida ka muuqata hadalkii wasiirkii Kalluumeysiga, Kheyraadka Badda iyo Bey’ada ee DFKMG, waxa uu safar ku tegey Yurub, halkaas oo khariidadaha cusub laga soo xaqiijiyey. Gaar ahaan dal kamid ah barwaaqa sooranka Yurub oo sida kor ku xusan ay barwaaqa sooranku ku dadaalayaan sidii Kenya uga caawin lahaayeen sidii ay wada xaajood ugala gasho badda Soomaalida.
May 8, 2011 Wasiirkii Kalluumaysiga DFKMG oo waraysi siiyey Idaacada Codka Maraykanka (VOA) ayaa yiri: "Dhibaatada jirta waxay ahayd inkasta oo aan anaga lahayn xeerka Soomaaliya ee (19)72dii waxa uu qorayaa Territorial Sea (Waters) oo ah 200 nautical miles, haddana dunida nooma aqoonsanin xeerka caalamiga ah, waxay nagu yiraahdeen oo keliya 'Soomaaliya waxaan u aqoonsanahay 12 nautical miles oo keliya". Haddii hadalkaasu hirgeli lahaa wasiirka waxaa ummadda Soomaaliyeed kuwaayi karaan 2.2 million kiiloomtiri oo laba-jibaaran oo ah dhulbadeedka Soomaalida.
Waxaa xusid mudan: Xeerka Law No. 37 waxaa websiteka FAO lagu daabacay October 21, 2000, websiteka Qarammada Midoobayna waxaa lagu daabacay July 23, 2001, waa xilliyadii la bilaabay in dukumiintiyada rasmiga ah lagu daabaco Internetka oo markaas curdin ahaa, xeerkaas oo qeexaya in badda Soomaaliya tahay Territorial Waters 200 mayl, halka wasiirkii Kalluumaysigu uu ku warwareegayey 12-maly, sidoo kalena ra'iisul wasaarahii hore ee DFKMG uu adeegsadey oraahda EEZ taas oo ahayd khalad cad.
Dr. Cabdiweli Gaas oo Saxiixiisa Ku Biiriyey Madaxda Soomaaliyeed ee Xagal Daacinaya Xornimada Dhul-Badeedka Soomaaliyeed...
May 11, 2011 Ra'iisul Wasaarahii DFKMG, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey Golaha Ammaanka QM ayaa mar uu ka hadlayey burcad-badeeda iyo sida loo xugi karo ammaanka badda Soomaaliya waxa hadalkiisii ka mid ahaa: in xukuumadiisu ay aaminsan tahay in burcad-badeeda lagu yarayn karo ama lagu joojin karo ayadoo burcadda la maxkamadaynayo, taas oo lagu darayo in "Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah" (exclusive economic zone) ammaankiisa la sugo."
June 19, 2011 ayaa Maxamed Farmaajo waxa uu iska casiley xilkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda FKMG, kaddib khilaaf soo kala dhexgalay madaxda sare ee DFKMG iyo caddaadis ka soo food saaray beesha caalamka. (Mar uu Farmaajo la hadlayey Jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Minnesota, bilowgii September 2011 waxa uu muujiyey cadaadiska shisheeye in uu soo food saaray xukuumadiisii.)
June 23, 2011 ayaa Cabdweli Maxamed Cali Gaas waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha DFKMG.
September 6, 2011 ra'iisul wasaaraha DFKMG C/weli Gaas ayaa saxiixday qoraal ka kooban 12 bog oo loogu magac daray "Roadmap" ama habraaca la doonayo in ay hirgeliso xukuumadda FKMG 2011/2012. Waxaa qoraalkaas ka mid ah in 19-ka December 2011 lagu dhawaaqi doono sharci khusaaya waxa loo yaqaan "Aagga Dhaqaalaha ee Gaarka ah" ee badda Soomaaliya. (EEZ declared by 19 December 2011).
September 7, 2011 Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobey ayaa si xooggan u soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay Shirkii Muqdisho, gaar ahaan "Roadmap-ka". Waxana Ban Ki-Moon uu sheegay in shirka Muqdisho ay ka soo baxeen qodobo qeexaya waxyaabaha muhiimadda la siinayo in la dhaqan geliyo ka hor inta aysan dhammaan muddada Kumeelgaarka ee xukuumaddan, waa ka hor August (2012). Waxaana Xoghayaha UN-ku uu beesha Caalamka ugu baaqay in ay imkaaniyaad (resources) dheeraad ah siiyaan hoggaamiyaasha DFKMG, arrintaas ay hirgeliyeen awgeed. (ama sida uu warka u dhigay).
September 8, 2011 Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Cabdiweli Gaas ayaa ansixiyey go'aankii kasoo baxay shirka Muqdisho. Go'aanada shirkaasna ay ka mid ahaayeen in sharci xuduudda badda ee loo yaqaan EEZ lagu dhawaaqi doono. Waxa kale oo ay golaha wasiiradu "ballan qaadeen inay sanadkaan kusoo afjarayaan marxaladda ku meel gaarka ah ee uu dalka ku jiray muddo dheer." (Tixraac Warsaxaafadeed: XRW/OM/PR 0050/09/11)
Hadalka aan meesha qaban ee ku qoran go'aamada ka soo baxay shirkii Muqdisho lagu qabtay (Sept 4-6, 2011) oo uu saxiixay C/weli Gaas, ayna ansixiyeen golahiisa xukuumadda (oo la doonayo in la dhaqan geliyo December 19, 2011) waa oraahda "Exclusive Economic Zone" EEZ (Aagga Dhaqaalaha ee Gaarka ah), taas oo meel ka dhac ku ah xeerka badda Soomaaliya u degganaa Qaranka Soomaaliyeed muddo 40 sano ah, Law no. 37 ee 1972 oo si cad u qeexay in Soomaaliya ay leedahay Territorial Waters (TS) oo ah dhul-badeed xeebta ka durugsan 200 mayl-badeed.
September 8, 2011 Waxaa magaalada Nairobi tegey Ra'iisul Wasaaraaha DFKMG C/Weli Gaas oo khudbad ka jeediyey shirkii loogu magac daray "SUMMIT ON THE HORN OF AFRICA" ("Shirkii Geeska Afrika" oo lagu qabtay Nairobi), waxana uu khudbadiisa ku sheegay in shirkii Muqdisho lagu qabtay la isku raacay dariiqii la mari lahaa 12ka bilood ee soo socda (Roadmap) ee ay hirgelinayso DFKMG - (Ref: XRW/OM/PR 043/09/11).
September 8, 2011 waxaa magaalada Oslo ee dalka Norway gaarey ra'iisul wasaarahii hore ee DFKMG, Maxamed Farmaajo, mar uu la hadlay Soomaalida Norway kama uusan hadlin qorshaha safarkiisa iyo hadaladii Norway ee ku aadanaa badda Soomaaliya.
September 9, 2011 waxaa magaalada Brussels ayaa ururka Midowga Yurub (EU) waxay kaga dhawaaqeen in ay aad ugu faraxsan yihiin habraaca "roadmap" ay hirgelinayso DFKMG, sida ay werisey hay'adda wararka ee AFP oo soo xiganaysey Catherine Ashton oo midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibada, ayadoo hadalka ku adkaysay ay ku faraxsan tahay "roadmap-ka".
September 11, 2011 waxaa magaalada Muqdisho shir ku yeeshay Golaha Wasiirada DFKMG, shirkaas oo uu guddoominayey Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka KMG ah Cabdiweli Gaas ayaa looga hadlay sidii loo soo afjarid lahaa marxaladda Kumeel-Gaarka (KMG) iyo fulinta habraaca sanadka 2011 /2012. (FG. Habraaaca 2011/2012 waxaa asaas u ah qodobkan: EEZ declared by 19 December 2011 Ufiirso: Waxaa laga hadlayaa waa EEZ ee ma aha TERRITORIAL WATERS, oo sida aan kor ku soo qeexnay aad u kala duwan.)
Shirka Golaha Wasiirada DFKMG, Muqdisho, September 11, 2011
September 12, 2011 Warbixin ay soo saartay Xukuumadda FKMG ay ku faahfaahisay Waxqabadkeedii (Ref: XRW/OM/PR 0052/09/11), ayey ku sheegtey sidan "Waxaa muddo seddex cisho gudahood lagu guuleystay in la isku raacay dariiqii la mari lahaa 12ka bilood ee soo socda (Roadmap) iyo in la fuliyo arrimaha mudnaanta koowaad u leh shacabka soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin dhameystirka Dastuurka, dib-u-habeynta baarlamaanka iyo sidii looga gudbi lahaa marxaladda kala guurka ah."
September 12, 2011 waxaa magaalada Muqdisho ka dhoofay ra'iisul wasaaraha DFKMG isagoo ku siijeeda xarunta Qarammada Midoobey ee New York, halkaas oo uu ka jeedin doono khudbad ku sabsan "hirgelinta Qorshaha xilliga kala guurka ah ee la filayo in lagu dhaqangeliyo ka hor August 2012." Sida kor ku xusana qorshaha 2012 ay qayb ka tahay in December 19, 2011 ay DFKMG hirgeliso xeerka EEZ ee badda Soomaaliya.
September 13, 2011 waxaa magaalada Addis Ababa lagu qabtay kulankii 293-aad ee Midowga Afrika (AU), halkaas oo wareegtadii kasoo baxday lagu qeexay sida loogu baahan yahay in ay fulaan qodobadii ROADMAP-ka ee shirkii muqdisho ka hor inta aan xukuumadda Soomaaliya laga bedelin Kumeel-gaarka (waa ka hor 20 August 2012), (Tixraac Halkan iyo halkan).
September 14, 2011 Kulan looga hadlayey Soomaaliya oo lagu qabtay Xarunta UN ee New York ayaa Madaxa Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobey (ahna Hindi) waxa uu sheega "in la sameeyo cabirka xuduudeeda badda Soomaaliya ee aagga ganacsiga (exclusive economic zone) si ay u dhaqan galaan qodobada Roadmap-ka ee shirkii Muqdisho..." ayuu yiri Madaxweynaha Golaha Ammaanka, ahna wakiilka dalka Hindiya u fadhiya UN-ka, Hardeep Singh Puri. Waxaana shirkaas goob joog ka ahaa ra'iisul wasaarha DFKMG C/weli Gaas oo shirkaas khudbadii uu kajeediyey ku caddeeyey in xukuumaddiisu ay dhaqan gelinayso habraaca Roadmap-ka. (Tixraac halkan).
September 17, 2011 kulan dhexmaray Ra'iisul wasaaraha DFKMG iyo xubno katirsan xukuumadda Maraykanka ayaa warsaxaafadeed ay DFKMG soo saartay waxay ku sheegtay sidan "(Ra'iisul wasaaraha DFKMG) waxuu xusay in shirkii Muqdishu uu ahaa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, isla markaana u sheegay Dowladda Mareykanka in Xukuumaddu ay ka go’antahay dhaqangelinta iyo fulinta Roadmap ka oo uu Ra’iisul wasaarahu sheegay inuu yahay mid ay Soomaalidu sameysteen ayna sahlanaan doonto dhaqangelintiisa, hase ahaatee uu ka codsaday Dowladda Mareykanka inay Dowladda Soomaaliya ku saacidaan sidii loo dhaqangelin lahaa barnaamijyada cad-cad ee la isku raacay" (XRW/OM/PR 057/09/11)
September 17, 2011 Qamar Haashim oo ah dublomaasiyad Soomaaliyeed oo ku sugan Paris ayaa shaaca ka qaaday "Ragga raba in biyaha Soomaaliya la cabiro waa dadkan aan aniga la joogo oo aan dalkooda ku noolahay ee martida u ahay (Faransiiska), ayaga ayaa si toos ah markii ay Ramadaankii ka hor wasaaradda Arrimaha dibadda igu qaabileen si cad iigu sheegay arrintaas." (Akhri/Dhegeysi)
September 17, 2011 Idaacadda Codka Maraynka ee VOA ayaa oo waraysi la yeelatey ra'iisul wasaaraha DFKMG C/weli Gaas oo ku sugnaa Washington (Virginia) waxa ay weydiisey su'aal ahayd in uu Qarammada Midoobey u ballan qaaday in ay fulinayaan Roadmap-ka, waxa uu ku jawaabey "Khasab ayey nagu tahay in aan ka baxno Transitional-ka, 10 sano ayaan ku jirnaa Transition. Maxaa loogu baahan yahay in Kumeel-gaarka (transitional-ka) loogu gudbo? Waxaa loogu baahan yahay sababtoo ah dawlad dhab ah ma ahin, xiriir laba-dhinac ah (Bilateral ah) amase xiriir lama geli karno waddama qaarkood. Sababtoo ah ma ah in sidii dawlad "permanent". Xataa adduunka haddii aynaan ka helin mucaawanada aan u baahanahay annaga Soomaali ahaan ayey khasab nagu tahay in aan ka baxno waxa aanu ku jirno oo aanu noqono dawlad dhab ah oo dalkeeda iyo dadkeeda gaarsiin karta horumar dhan walba ah ama dhalka ijtimaaciga, dhaqaalaha iyo dhanka siyaasaddaba. Marka roadmap-ka in aan ka dhabaynaa danteena ayaa ku jirta, ma ah wax nalaku khasbaayo, annaga Soomaali ahaan ayaa dani noogu jirtaa.." (DHEGEYSO).
Roadmap-ka waxaa ku qoran in 19-ka December 2011 lagu dhawaaqo cabirka badda Soomaaliya oo ah EEZ, taas oo lagu baabi'inaayo sharcigii badda Soomaaliya u dhignaa 40-ka sano.
Shacabka Soomaaliyeed waxay la yaaban yihiin ayaa ah sababta ay madaxda DFKMG ugu dadaalayaan in ay baabi'yaan xeer u deganna Soomaaliya 40 sano. Arrinta kale oo layaabka leh waxay tahay in Qarammada Midoobay ay dalalka xeebaha leh laga soo bilaabo 2009 u ogolayd in ay kordhisan karaan xudduudda baddooda ilaa meel xeebta ka durugsan 350 mayl-badeed.
Baarlamaanka DFKMG ilaa hadda (Sept 12, 2011) go'aan kama qaadan arrinta soo cusboonaatay ee xukuumaddu ku xagal daacinayso go'aankii ay hore baarlamaanku ganafka ugu dhufteen ee ku saabsanaa xudduudda Badda Soomaaliyeed.
Waxaa cad go'aamada loogu yeeray "Roadmap" oo la doonayo in laga ansixiyo DFKMG in ay ku hoos qarsoon yihiin qodobka sare oo noqonaya KHIYAANO QARAN. Sidaas daraadeedna ay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka DFKMG in aysan ansixin. Soomaaliya waxa u cabiran baddeeda, waxaa qeexay xeer u degganaa 40 sano. Taas ayaa laga doonayaa baarlamaanka Soomaaliya in ay dhawraan, wixii taas tirtirayana ay is hor taagaan.
Jawaabta arrintan cusub iyo difaaceeda waa mid ka dhexeeya shacabka Soomaaliyeed oo dhan.
Jawaabta Akhristayaasha: Mid kamid ah akhristayaasha oo magaciisu yahay Abdiweli ayaa ku jawaabay sidan: "Horta waxaa su’aal ah LAW 37 1972 waa xeer Somalia ay ku cadaysay dhul badeedkeeda, sida ku cad qaanuunka qaramada midoobana waa xeer sharciya oo dhaqan galay waqtigaas oo aan doodi kataagnayn, marka kumeelgaarka raga hogaaminaya ma xeerkaas ayey diidan yihiin mise in Somalia dhulbadeedkeeda in lagaarsiiyo 350 mile ayey doonayaan? Waxa loo baahan yahay waxa weeye DFK waa in ay jawaab kabixiso hadaf-keeda arin taan quseeya. Baarlaamka intaan sanadkaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxay indiin kaga fadhiyaan in aad dawlada kumeelgaarka aad waydiisaan waxa damacooda iyo fahamkoodu yahay ee dhulbadeedka Soomaaliya ku aadan. Ogaada baarlaanow taariikhda Somalia mar baad baal dahab ah kagasheen, bal markaana labaysta intaan waqtigiinu dhamaan kahor... Akhri Jawaabta oo dhamaystiran..
Faafin: SomaliTalk.com | September 9, 2011 | Cusboonaysiin: September 12, 2011
Shirkii Muqdisho ujeedadiisu waxay ahayd in Badda Soomaaliya lagu wareejiyo Kenya, sidaas waxaa shaaca ka qaaday Jaamac Cali Jaamac..
TIXRAAC: Law No. 37 on the Territorial Sea and Ports, of 10 September 1972